Iindaba-I-YIHOO AN333-Phenol-yasimahla kunye neHydrolysis elungileyo yokuXhathisa iAntioxidant
Xa unxibelelwano lwemveli lwe-phenolic antioxidant kunye ne-nitrogen kunye negesi yeoksijini esemoyeni, ivelisa ulwakhiwo lwequinone. Isakhiwo seQinone sisizathu esingunobumba kunye nokubomvu.
I-phosphite antioxidant ikwasetyenziswa ngokubanzi njenge-antioxidant encedisayo. Nangona kunjalo, ngokuphuculwa okuqhubekayo kwemigangatho yokhuselo lokusingqongileyo kwe-EU, iimfuno ze-phosphite antioxidant ziya ngokuya ziphakama. I-Phosphite antioxidant kufuneka ibe nobungqongileyo kwindalo, ingabi yityhefu, ingekho i-phenolic, i-hydrolysis iyamelana, kwaye imelane nobushushu obuphezulu.
I-phosphite i-antioxidant encedisayo yenye yezona zongezo zinamandla zokuzinziswa kwepolymer kwii-1990s. Kwiminyaka elishumi, iintlobo ezintsha zesakhiwo zivela ngokungapheliyo, kodwa ngokwakhiwa kwazo kwemichiza, sinokufumanisa ukuba ulwakhiwo olutsha lwe-phosphite uninzi lunendandatho enamakha, kwaye ubukhulu becala zizakhiwo zeringi ejikelezayo kunye ne-bisphenol phosphite ester. Kuthetha ukuba i-phosphate ester yophuhliso lwetekhnoloji ye-antioxidant kufuneka igxile kwimiba emibini: indlela yokuphucula uzinzo lokuchwetheza kunye nendlela yokuphucula uzinzo lwe-hydrolytic.
I-non-phenolic antioxidant -AN333 kunye ne-AN340, ayiqulathanga sakhiwo se-phenolic, ngenxa yoko inokuyiphepha ngokufanelekileyo ingxaki etyheli ebangelwa sisakhiwo se-quinone. Iqondo lobushushu processing kunokuba ngentla 180 ℃, kwaye sele isicelo DB, PVC kunye nezinye iinkalo ngabathengi ezininzi nakumazwe aphesheya.
Phakathi kwazo, i-AN333 ibonakaliswe ukuba isebenza ngokugqwesileyo kwizinto ze-PU ezinamagwebu, ngokuxhathisa okutyheli okugqwesileyo kunye nokumelana ne-hydrolysis. Yeyona nto ibambeleyo endaweni yeJOHOKU Chemical JP333E.
Ngaphandle kwe-non-phenol antioxidants, sikwabonelela ngezinye izongezo ezisetyenziswa kwisicelo se-PU. Apha ngezantsi kweemveliso zikhethwe nguwe:
UKUHLELWA IMVELISO CAS UHLOBO LWESIXEKO
YIHOO UV B75 QHAFAZA TINUVIN B75
ISIQINISEKISO YIHOO AN333 77745-66-5 JP333E
ILANGAMANI LIYABUYEKA YIHOO FR950 /